Lixabiso BB Umanyolo Umxhubi Machine Suppliers kunye Factory | YiZheng
Nkqo Fermentation Tank
Imveliso yeCompactizer yokuChumisa
Umatshini wokuxuba we-BB isetyenziselwa ukuvuselela ngokupheleleyo kunye nokuqhubekeka ukukhupha izinto ekrwada kwinkqubo yemveliso yokudibanisa isichumisi. Izixhobo zinoveli kuyilo, ukuxubana okuzenzekelayo kunye nokupakisha, kwanokuxuba, kwaye kunokwenzeka okunamandla.
Yintoni umatshini wokuxuba we-BB?
BB Isichumisi Umatshini wokuxuba izinto igalelo ngenkqubo bephakamisa lokondla, umgqomo intsimbi unyuka usihla izinto zokondla, ekhutshwe ngokuthe ngqo kumxube, kunye ne-BB isichumisi sokuxuba ngokusebenzisa indlela ekhethekileyo yangaphakathi yokujija kunye nolwakhiwo olwahlukane kathathu lokuxuba kunye nemveliso. Xa usebenza, izinto ezitshintshayo zokujikeleza ngokujikeleza iwotshi, ukujikeleza ngokungafani newotshi ukukhupha izinto, isichumiso sihlale emgqomeni wezinto okwethutyana, emva koko siyeke ngokuzenzekelayo ngesango.
Umatshini wesichumiso se-BB unokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
Usetyenziselwa ntoni Umxube wesichumisi se-BB?
BB Isichumisi Umatshini wokuxuba Yoyisa imixube ye-chromatografi kunye nokusasazwa kwezinto ezibangelwa kukuhluka kwezinto ezahlukeneyo kunye nobungakanani bamasuntswana, ngaloo ndlela kuphuculwe ukuchaneka kwedosi. Ikwasombulula impembelelo kwinkqubo ebangelwe zizinto ezibonakalayo, ukungcangcazela koomatshini, uxinzelelo lomoya, ukuguquguquka kwamandla emozulu kubanda njl.Ineempawu zokuchaneka okuphezulu, isantya esiphezulu, ubomi obude, njl., Olukhetho olufanelekileyo kwisichumisi seBB ( mixed) umvelisi.
Ukusetyenziswa kwesixubi se-BB Sesichumisi
Inkqubo ye- BB Isichumisi Umatshini wokuxuba Isetyenziswa ikakhulu kwisichumiso sezinto eziphilayo, isichumisi esimbaxa kwaye phantsi komqokeleli wothuli wesityalo samandla ashushu, kwaye inokusetyenziswa nakwimichiza yokunyibilikisa isinyithi, imigodi, izinto zokwakha kunye namanye amashishini.
Izinto eziluncedo zeBB isichumisi Umxhubi
(1) Izixhobo zigubungela indawo encinci (i-25 ~ 50 yeemitha zesikwere) kwaye inokusetyenziswa okuphantsi kwamandla (amandla esixhobo sonke angaphantsi kwe-10 kilowatts ngeyure).
(2) Injini ephambili yenziwe ngentsimbi eshishinayo, kwaye inkqubo yolawulo inokulungela iimeko ezahlukeneyo zomsebenzi.
(3) Sebenzisa ukhuseleko lwamanqanaba amabini kunye netekhnoloji yokuhluza yamanqanaba amaninzi, umlinganiso ochanekileyo.
(4) Ukuxuba okungafaniyo, ukupakisha okugqibeleleyo, akukho kwahlulwa kwezinto kwinkqubo yokupakisha, ukulungiswa okungahambelaniyo kuluhlu lokuxuba lwe-10-60kg, ukoyisa ukwahlulwa kwezithako ezinkulu kwimveliso nakwinkqubo yokupakisha.
(5) I-actuator yamkela i-pneumatic drive, amanqanaba amabini okondla ubungakanani, umlinganiso ozimeleyo kunye nomlinganiso wokuqokelelwa kwezinto ezahlukeneyo.
Isichumisi seVidiyo seBB soMxube
Ukukhethwa kweModeli yoMxube weBB wokuChumisa
Umxube we-BB wezichumisi ineendlela ezahlukeneyo zokucacisa, kunye nemveliso yeyure nganye ye-7-9T, 10-14T, 15-18T, 20-24T, 25-30T, njl .; ngokwezinto ezixubekileyo, kukho iintlobo ezi-2 ukuya kwezi-8 zezixhobo.
Amandla emveliso （t / h）
20 ～ 50kg
0.5 ± 0.1Mpa
Iqondo lobushushu elisebenzayo
-30 ℃ + 45 ℃
＜ 85% (akukho kubanda)
Egqithileyo Disc Umxhubi Machine
Okulandelayo: Nkqo isichumisi Umxhubi
Intshayelelo Yintoni iTanki lokuVundisa elithe tyaba? Ubushushu obuphezulu beNkunkuma kunye neFurementation Tank yokuxuba itanki ikakhulu yenza ubushushu obuphezulu be-aerobic yemfuyo kunye nomgquba weenkuku, inkunkuma yasekhitshini, udaka kunye nenye inkunkuma ngokusebenzisa umsebenzi wentsholongwane ukuze kufezekiswe unyango oludibeneyo ...
Bona iimveliso ezingaphezulu >
Double-asi Chain isityumzi Machine isichumiso Cr ...
Intshayelelo Yintoni i-asi-Double Chain isichumiso isityumzi Machine? I-Double-axle Chain Crusher Machine Fertilizer Crusher ayisetyenziswanga nje ukutyumza amaqhuma emveliso yezichumiso eziphilayo, kodwa ikwasetyenziswa kakhulu kwimichiza, izinto zokwakha, ezemigodi nakwamanye amashishini, kusetyenziswa ukungqinisisa okuphezulu kwe-MoCar bide chain. Um ...
Intshayelelo Yintoni na-Stage ezimbini isichumiso isityumzi Machine? Umatshini we-Two-Stage Isichumisi soMatshini luhlobo olutsha olunokutyumza ngokulula ukufuma kwamalahle, i-shale, i-cinder kunye nezinye izinto emva kophando lwexesha elide kunye noyilo ngononophelo ngabantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi. Lo matshini ulungele ukutyumza iqabane eluhlaza ...
Intshayelelo Yintoni na nkqo Chain isichumiso isityumzi Machine? Nkqo Chain isichumiso isityumzi yenye izixhobo ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo yokutyumza kwishishini esimbaxa isichumiso. Inokulungelelaniswa okunamandla kwezinto ezinomxholo ophezulu wamanzi kwaye inokutya ngokutyibilikayo ngaphandle kokuthintela. Izinto zingena ukusuka f ...
Intshayelelo Yintoni i-Granular Fertilizer Rotary Coating Machine? Umatshini wokutyabeka ojikelezayo kunye necomputer ojikelezayo ojikeleza umatshini wokutyabeka ngokukodwa uyilelwe ngokukodwa kulwakhiwo lwangaphakathi ngokweemfuno zenkqubo. Esi sisichumiso esisebenzayo sokucoca izixhobo ezizodwa. Ukusetyenziswa kwetekhnoloji yokutyabeka kunokusebenza ...
Intshayelelo Luluphi uhlobo lwezixhobo zomgquba weforklift? Isixhobo seForklift Isixhobo seKhomputha sisixhobo sokujika esine-in-nye esisebenza ngokuqokelela ukujika, ukuhambisa, ukutyumza nokudibanisa. Inokuqhutywa kwindawo evulekileyo nakwiworkshop ngokunjalo. ...